Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Hotels & Ebe ntụrụndụ » Sandals Royal Curaçao bụ ozi ọma maka njem nlegharị anya Curacao
Caribbean • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • Akụkọ gbasara Jamaica • News • Agbamakwụkwọ Romance Honeymoons • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ dị iche iche
Dos Awa, Sandals Resorts bụ naanị ọdọ mmiri na-adịghị agwụ agwụ nke nwere nnukwu elu na nke ala zuru oke maka ịtụ n'anya na-atụ egwu.
Sandals Resorts International (SRI) na -ekpughere nkọwa ọhụrụ maka ebe a na -atụ anya flagship nke iri na isii na mbido ụlọ ọrụ ahụ na Curaçao, nke akpọrọ Sandals Royal Curaçao.
Nnukwu ọkwa na -abịa na Wenezde, Ọgọstụ kwesịrị ka onye ọ bụla na -eche ịga ezumike ezumike eze yana Curacao jiri ntụgharị Jamaica.
Ọ malitere ụbọchị ekeresimesi n'afọ gara aga mgbe Sandals Resort kwupụtara mmụba ya na agwaetiti Caribbean nke Curacao - na ntụgharị Jamaica.
Akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ Curaçao ga-ewetara agwaetiti ahụ ihe ọhụrụ mepere emepe, nke dabara na akara Sandals Resorts a ma ama n'ụwa niile.
A maara Curaçao, agwaetiti Caribbean nke Dutch, maka ụsọ mmiri ya ndị na -abanye n'ọgba na nnukwu mmiri coral jupụtara na ndụ mmiri. Isi obodo ahụ, Willemstad, nwere ọmarịcha ụlọ ndị nwere agba ọchịchịrị, na-ese n'elu àkwà mmiri Emma Bridge, na aja aja, Mikvé Israel-Emanuel Synagogue na narị afọ nke 17. Ọ bụkwa ọnụ ụzọ na -aga n'akụkụ osimiri ọdịda anyanwụ dị ka Blue Bay, ebe mmiri na -ewu ewu.
Late Sandals Resorts International guzobere na onye isi oche, Hon. Gordon “Butch” Stewart nwere ọhụụ ịgbanwe agwaetiti Curacao wee soro nwa ya nwoke, osote onye isi oche Adam Stewart na Disemba mee ọkwa a;
Gordon “Butch” Stewart kwuru, "Ọ bụụrụ anyị ọmarịcha ịrụkọ ọrụ na gọọmentị Curaçao na ezinụlọ Smeets na mbọ ọhụrụ a na -atọ ụtọ maka ụdị akpụkpọ ụkwụ." "Anyị chọrọ igosipụta ekele miri emi anyị nwere maka Roald Smeets, onye nyere aka na usoro a ma nwee ọ toụ nke ukwuu ịrụ ọrụ. Anyị na -eme atụmatụ ime ihe karịrị akụkụ anyị iji bulie ekele ụwa maka obodo a mara mma. ”
N'ịbụ nke dị na hekta 44 n'ime ụlọ nkeonwe Santa Barbara, ihe echekwara echekwara naanị hekta 3,000, Sandals Royal Curaçao ga-ejikọ ihe ịtụnanya ụwa n'oke ụwa-ọzara, oke osimiri, ugwu, na ikpere mmiri-yana ahụmịhe ebe a na-eme njem. A mara ọkwa na Royal Resort ga -emepe ọnụ ụzọ ya na Eprel 14, 2022
Na Wednesde, Ọgọst 4, 2021Sandals kwupụtara na ntinye akwụkwọ ga -ekwe omume ugbu a yana ọ na -abịa na mkpali ruru $ 1000.
Pịa ebe a maka ọkwa zuru oke.
Ụgbọelu RAF F-35 nke Britain dara na…
Volkswagen ọhụrụ maka ejiji na egwuregwu, ụdị ndị China